Ku raaxeeysan raaxo badan oo khudaarta - hadhuudhka - maaha sabab la'aan loo yaqaan "boqoradda beertu." Faytamiin iyo macdanta macdanta iyo dhadhanka aadka u fiican waxay ka dhigaan suxuunta galleyda (oo sidoo kale loo yaqaano hadhuudh) ma aha oo kaliya daaweyn soo dhaweyn ah oo ku saabsan miisaska, laakiin sidoo kale dukaamo faa'iido u leh jirka bini'aadamka. Qodobkan waxaan ka hadli doonaa sifooyinka aasaasiga ah ee firileyda cajiibka ah, hababka diyaarinta iyo kaydinta.
Waxaa jira mar kasta oo karootada cusub ah oo ku yaal gabbaadyada xilliga jiilaalka. Waxay ahayd iyada oo bixiya liiska miisaanka jiilaalka oo leh waxyaabo kala duwan oo waxtar leh. Waxaa lagu ridaa maraqa, saladhka, saxanka dhinaca iyo xitaa ku daray macmacaanka macaan. Haddii aad leedahay dhul beereed ama aad iibsato tiro badan oo karootada ka hor horey jiilaalka, halka ay weli tahay raqiis, waxaad u baahan tahay inaad barato sida loo kaydiyo si sax ah.
Galley cadaan ah, wax ka badan 24 saacadood ka hor intaan la karin, waxay leedahay sifooyin dhadhan fiican leh iyo caraf udgoon. Kaabashooyinka noocan oo kale ah ayaa si sahlan loo kariyey, waxay sidoo kale si dhaqso ah u cadayaan ama la dubay. Laakiin waxa ku saabsan cobs ka badan? Maxaa la sameeyaa haddii cawska iyo "da'da"? Miyuu suurtogal u yahay badbaadinta sheyga?
Karootada waa khudradda asaasiga ah ee lagu qiimeeyo qaab-dhismeedkooda iyo tiro badan oo faa'iido leh. Sababta oo aan sabab u lahayn degganaha xagaaga oo dhan dhowr sariirood oo ka hooseysa karootada - khudradda waa wax aan la qabin marka la eego beerashada, laakiin waxaa si xoog leh u nugul duufaanka iyo u dabbaalanayo jiilaalka. Si habboon u ilaalinta dabacasaha mararka qaarkood way ka adag tahay marka loo koro.
Karootada waa khudradda caanka ah ee ugu caansan adduunka. Dalagga xididgan wuxuu leeyahay dhadhan wanaagsan, sidoo kale waxaa ka buuxsamey fitamiino iyo macdan oo si wax ku ool ah u saameeya caafimaadka bini'aadamka. Karootada waa mid ka mid ah khudaarta ku jirta xayawaan kasta oo sanadka oo dhan ah. Sidee loo keydiyaa karootada xilliga jiilaalka?
Karootada waa dalag cagaaran oo caadi ah oo bannaanka uuna sii kordhaya maanta. Daryeelidda waa mid fudud, laakiin habka kaydinta wuxuu leeyahay sifooyinkiisa, iyadoo ku xiran tayada dabacasaha iyo nooca. Inkasta oo siyaabo badan oo loo ilaaliyo beergooyska, ikhtiyaarka lagu kaydin karo karootiga lagu aasay dhulka ayaan weli caan ahayn.
Corn ... Yaan jecel qoraxdaas? Qof kastaa wuxuu rajeynayaa inuu bilaabo xilliga xagaaga si uu u cuno quraarado huruud ah. Laakiin waxa la sameeyo marka aanad heli karin hadhuudh cusub? Dabcan, cun cunto qasacadaysan. Nasiib wanaag, waxaad ka heli kartaa dukaanka iyo wakhti kasta. Tilmaamaha aad cuni kartid siiriyaalka, faa'iidooyinka iyo faa'iido daruuriga ah ee hadhuudhka qasacadaysan, iyo sidoo kale cuntooyinka tallaabo tallaabo ah, waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan.
Kaliya kuwa si shakhsi ahaan ah u kora dalagyada beerta ayaa ogaanaya sida uu ugu fiicanyahay inuu soo goosto goosashada qani ku ah dhamaadka xilli-ciyaareedka. Karootada - mid ka mid ah dalagyada khudradda caanka ah ee ugu caansan ayaa ku koray meel kasta. Laakiin si aad ugu raaxaysato khudradda quruxda badan iyo cufnaanta jirkaada leh fitamiinada xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo qodo si sax ah iyo marka ay ka wanaagsan tahay inaad sameyso.
Kaydinta dabacasaha guryaha waa wax aad u adag, maxaa yeelay waxaa jira heerkul sare iyo hawo qalalan. Sidaa darteed, xididdadu waxay bilaabaan in ay Gagaashaan, oo ay ku daboolaan oo ay ku daboolaan caaryada. Laakiin tani ma aha sababta ay u murugeysan tahay, tan iyo markii maqnaanshaha dhulka hoostiisa, beergooyska soo ururay dayrta waxay noqon kartaa balakoonka. Qaababka qaabdhismeedka dalagyada xididada Dalagyada dalaggu waxay u nugul yahiin inay ku dhuuntaan qulqulo farsameysan.
Noocyada ku habboon iyo nolosha shelf ee karootada
Beeraley kasta oo waayo-aragnimo leh waxay ogtahay in beerto iyo dalagyada beeraha ay badh badh yihiin dagaalka. Hase yeeshee geedi socodka ugu adag ee adagi waa inuu ilaaliyo beergooyska. Halkan su'aasha ayaa soo baxaysa - nooca kaydinta ayaa ah mid ku haboon khudaarta gaarka ah. Beerta bilowga ah waxay qabaan su'aalo badan oo ku saabsan sida loo abaabulo kaydinta dabacasaha.
Siyaabo badan oo lagu keydiyo dabacasaha xilliga jiilaalka. Talooyin waxay u arkaan inuu bannaanka u yahay
Kaydinta karootada xilliga qaboobaha waa arrin deg-deg ah, maaddaama khudraddan loo dulqaadanayo xilliga dayrta-qaboobaha aad u liita. Laakiin tani ma aha sabab loogu niyad jabo, maadaama ay jiraan tiro ku filan oo siyaabo wax ku ool ah. Dhamaantood waa sahlan, la awoodi karo oo uma baahna waqti badan. On hababka ugu fiican ee ilaalinta khudradda this faa'iido leh, akhri maqaalka.
Karootada waa badeecad caafimaad leh oo dhadhan fiican leh oo si fiican u wanaagsan in la arko miiska qaboobaha. Haynta khudradda cagaaran ee cusub iyo adag tahay marka loo eego kallana way ka adag tahay khudaarta kale. Heerka hore ee diyaarinta kaydinta waa doorashada saxda ah ee abuurka. Waa maxay darajooyinka dabacasaha ay ka fiican yihiin inay iibsadaan da'da dheer? Waxan ka hadli doonaa tan iyo waxyaabo kale oo badan oo ku jira maqaalkan.
Talooyinka beerta iyo gurigaba siday u ilaaliyaan karootada ilaa guga cusub
Ma jiro guri-guri guri oo aan kari karin kijinka iyada oo aan lahayn khudrado aad u fiican, sida dabacasaha. Waxaa loo isticmaalaa maraqa, saladhka, suxuunta cuntada, suugada, iyo xitaa dubista iyo macmacaanka. Intaa waxaa dheer in dhadhanka dabacasaha aad u faa'iido badan. Waxay ka kooban tahay fiber, fitamiino ah kooxo B, C, vitamin E dhalinyarada, potassium, beta-carotene, birta.
Kaydinta kaydka ayaa ah nidaam mas'uul ah oo u baahan tababarka gaarka ah. Waxay ku jirtaa saxda ah ee hirgelinta waxay ku xiran tahay muddada kaydinta ee goosashada. Su'aashu waxay ku saabsantahay hadday suurtogal tahay in la maydho karootada kahor inta aan la dhigin dhulka hoostiisa? Sidaas, nooca dabacasaha jiilaalka weyn iyo sida loo diyaariyo kaydinta, tixgelin xigta.
Inta badan delicacies casriga ah, gaar ahaan carruurta, waxay yihiin xaalad ahaan faa'iido leh, iyo marar badan - si khaas ah waxyeello leh sababtoo ah wax lagu daro, ka badan sonkorta iyo subagga. Waxaad bedeli kartaa xaaladda adoo sameynaaya buunshaha guriga. Maqaalkani, waxaan eegi doonaa sida loo sameeyo dufanka cusub ee hadhuudhka cusub ee guriga iyo ku shub digsi qaboojin leh gacmahaaga, ama ku kari mashiinka microwave guriga: waa qaali ah, ma adkaan iyo dhakhso, iyo ugu muhiimsan - dhadhan fiican iyo caafimaad leh.
Sidee loo sameeyaa hadhuudh la dubay digsiga?
Corn waa noocyada kaliya ee ka tirsan caleenta Corn. Waa geedka cawska iyo geedka, wuxuu kori karaa illaa saddex mitir oo dherer ah ama xitaa 6 ilaa 7 mitir. Waxay leedahay afar nooc, iyo sidoo kale saddex qaybood oo duurjoogta ah. Corn waxa loo tixgeliyaa geedka qadiimiga ah ee ugu weyn adduunka. Waxaa loo qaybiyay sagaal kooxood oo ah botanical.
Karootada waxaa ku jira fiitamiinno faa'iido leh iyo walxaha raadraaca iyo waa shey caadi ah miiska. Waa qalab aad u fiican oo lagu ilaalinayo caafimaadka wanaagsan ee dadka waaweyn iyo carruurta. Si karootada si ay u faa'iido ma aha oo kaliya xagaaga, laakiin sidoo kale xilliga qaboobaha, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado shuruudaha ay dhigista iyo kaydinta. Kaydinta ku haboon waxay u baahan tahay heerkul gaar ah, qoyaan iyo qaab hawo.
Xagaaga ayaa soo maray! Bannaanka u daryeelaan - afka oo dhan. Sida loo badbaadiyo beergooyska, si aad u badan si ay faa'iido u hesho dhamaan dadka jecel? Sida loo diyaariyo khudradda Karootada waxay aqoonsadeen dhammaan "boqoradda" dayrta. Sweet, savory, juicy iyo gaajo - waxaad leefahay leexintaada, laakiin awood leh! Waxay ka dhakhso badan tahay dhammaan dalagyada cufan oo dhoobo iyo kallana.